शल्यक्रियामार्फत प्रसुती भएको कति दिन पछि यौनसम्बन्ध राख्ने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ शल्यक्रियामार्फत प्रसुती भएको कति दिन पछि यौनसम्बन्ध राख्ने ?
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७७ पुस २८ गते, २०:०० मा प्रकाशित
शल्यक्रियामार्फत प्रसुती भएको महिलाहरुलाई सामान्य हुनमा केहि समय लाग्छ। जसकारण चिकित्सकले केहि महिनाको लागि शारीरिक सम्बन्ध बनाउन नहुने बताउछन। जुन महिलाको शल्यक्रियाको माध्यमबाट डेलिभरी हुन्छ ती महिलाहरु कति महिना पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा रहेको पाइन्छ। स्वास्थ्य विद ४\_५ महिनापछि मात्रै यौन सम्बन्ध बनाउने सल्लाह दिन्छन। जान्नुहोस् शल्यक्रियामार्फत प्रसुती भएको कति समय पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्न सकिन्छ ?
अधिकांश मानिस बच्चा जन्मेपछि जीवन बदलिने कुरामा सहमत छन्। र महिलाको लागि सन्तान जन्माउन सजिलो छैन। नर्मल डिलीभरी वा सिजेरियन सेक्शन डिलीभरीबाट सन्तान जन्माउनु हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ तपाई कति समयमा ठिक हुनहुन्छ भनेर। गायनोकोलजिस्टहरुका अनुसार प्रसुती हुने विक्तिकै शारीरिक सम्बन्ध बनाउन हत्तार गर्न हुँदैन।
शल्यक्रियामार्फत प्रसुती भएको महिलाहरुको यौन जीवनमा ठुलो प्रभाव पर्छ। जबसम्म महिलाको शरीर पुरा तरिकाले स्वस्थ हुँदैन तबसम्म यौन सम्बन्ध बनाउन हुँदैन। प्रसुतीपछि छिटै शारीरिक सम्बन्ध बनाउँदा आमाको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्दछ।
गर्ववती भएपछि महिलाको शरीरमा कयौं प्रकारको शारीरिक परिवर्तन आउने गर्छ। गर्भाशय सामान्य आकारमा आउँन पनि धेरै समय लाग्ने हुन्छ। प्रसुतीपछि ४ देखि ६ हप्तासम्म रक्तश्राव हुने गर्छ। जसकारण शल्यक्रियाको केहि सातासम्म सम्बन्ध बनाउन हुँदैन।